Corona နေ့ရက်များရှိ Izmir လမ်းများပေါ်တွင်ကတ္တရာထောင်ပေါင်းများစွာ ၄၁၈ | RayHaber | raillynews
[29 / 05 / 2020] ၀ န်ထမ်းများနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးမှအကျိုးရှိလူငယ်များအတွက်သတင်းကောင်း!	06 တူရကီ
[28 / 05 / 2020] နောက်ဆုံးမိနစ် - တနင်္ဂနွေနေ့ (၁၅) မြို့တွင်ညမထွက်ရအမိန့်များရှိလိမ့်မည်	coronavirus
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirCorona Days ရှိ Izmir ၏လမ်းများပေါ်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကတ္တရာလေးလုံး
Corona Days ရှိ Izmir ၏လမ်းများပေါ်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကတ္တရာလေးလုံး
20 / 05 / 2020 35 Izmir, ကတ္တရာသတင်းများ, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
Corona ကာလများအတွင်း Izmir လမ်းများပေါ်တွင်ကတ္တရာတန်ချိန်ပေါင်းများစွာရှိသည်
Corona ကာလအတွင်း Izmir Metropolitan Municipality သည်လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မြို့ပြအဖွဲ့များသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကတ္တရာတန်ချိန် ၄၁၈၀၀၀ နှင့်စတုရန်းမီတာ ၂၀၀ ပါကေးခင်းဖြင့် အသုံးပြု၍ မြို့၏လမ်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။
coronavirus အစီအမံ၏မူဘောင်အတွင်းİzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်လမ်းများပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်ပြီးသိပ်သည်းမှုလျော့နည်းသွားသည်။ မတ်လ ၁ ရက်မှမေလ ၁၉ ရက်အကြားsquareရိယာစတုရန်းမီတာ ၂၀၀ ကိုပါကေးခင်းပြီး quetZBETON အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့များကကတ္တရာတန်ချိန် ၄၁၈၀၀၀ သွန်းလောင်းခဲ့သည်။
4 575 မှတ်ကြားဝင်ခဲ့သည်
အဖွဲ့များသည်မြို့တစ်လျှောက်ရှိအချက်အလက် ၄၀၀၀ ၇၅၇ မှတ်၊ အထူးသဖြင့်အဓိကသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ပျက်စီးသောကတ္တရာနှင့်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံတူးဖော်ရေးကိုasရိယာ ၇၉,၀၀၀ ၅၉၄ စတုရန်းမီတာတွင်ကတ္တရာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤအမှုလုပ်ငန်းများပြီးစီးရန်အတွက်ကတ္တရာပြင်ဆင်ဖာထေးမှု ၅၅ ခုနှင့်ချိတ်ဆွဲထားသည့်အခင်းများသည်စုစုပေါင်းတန် ၄၁၁၀၀၀ ပူသောကတ္တရာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပါကေးခင်းထားသည့်squareရိယာ ၂၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်
မတ်လအစတွင်မြို့၏လမ်းဘေးနှင့်လမ်းဘေးစင်္ကြံများကိုလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်စီမံကိန်း ၂၉ ခုပြီးစီးခဲ့သည်။ စီမံကိန်း ၁၈ ခု၏လုပ်ငန်းသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ အဖွဲ့ ၁၉ ဖွဲ့ဖြင့်ပါကေးကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်squareရိယာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စတုရန်းမီတာ ၂၀၀ ဝန်းကျင်ကိုပါကေးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
အဖွဲ့များသည်ပူနွေးသောရာသီဥတုရှိသော်လည်းမြို့၏နေရာအနှံ့တွင်လုံခြုံသောအကွာအဝေးနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအခြေအနေများကိုဂရုပြုကြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များကိုကာကွယ်ရန်အလုပ်ခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအထူးကုများ၊ အလုပ်ခွင်သမားသမားများနှင့်သူနာပြုများကအဖွဲ့များကိုသင်တန်းများပေးသည်။ သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အကာအကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအနှောင့်အယှက်မရှိပေးတယ်။
15.000 0-8 မီလီမီတာတန်ချိန်; နုအတွက် 5.000 8-16 မီလီမီတာတန်ချိန်နှင့်တန်ချိန် 12.500 16-32 မီလီမီတာစုစုပေါင်းဝယ်ယူ
အိတ်စွပ်နည်းလမ်းများအဘို့အကတ္တရာ၏ 20 တထောင်တန်ချိန်
ကတ္တရာ၏ 25 တထောင်တန်ချိန် Bornova ၏လမ်းကြောင်းသို့သွန်းလောင်းပါလိမ့်မည်
ရွာလူမိုက်မှ 17 650 တစ်ထောင်တန်ကတ္တရာသုံးလမ်းမပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့နေကြတယ်
Corona Days ရှိ Engelsizmir အတွက်လမ်းပြမြေပုံ
ကတ္တရာ၏ 23 တထောင်တန်ချိန် Kartepe အလောင်းတော်ထားခဲ့ပါတယ်
Kayapınarမြို့တော်စည်ပင်က 70 တထောင်ကတ္တရာတန်ချိန်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
Batman မြူနီစီပယ် 200 တစ်ထောင်တန်ကတ္တရာသုံး receiver
ငါ၏အပစ်မှတ် 100 တစ်ထောင်တန်ကတ္တရာသုံးစီးရီး Yenimahalled
2 265 ကတ္တရာ၏တန်ချိန်သန်းတူရကီမှအလောင်းတော်ထားခဲ့ပါတယ်
လျှပ်စီး 92 ကတ္တရာလမ်းများ၏တထောင်တန်ချိန်
Tala 25 တစ်ထောင်တန်ကတ္တရာသုံး receiver
140 Izmir Metropolitan မှခရိုင်စည်ပင်သာယာမှမျက်နှာထောင်ပေါင်းများစွာ၏မျက်နှာဖုံးများ
Turkcell Postpaid နှင့် Prepaid GNC Packages နှင့် Tariffs - GNÇFırsat Midi
မေလ 30 1935 2775 ရက်စွဲနှင့်ဥပဒေအမှတ်: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
Instagram Like များတိုးပွားရန်လက်တွေ့ကျကျနည်းလမ်း
Izmir မြို့ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်စနေ၊ İZBANအမှုဆောင်မည်လား။
အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အန်ကာရာတွင်စနေ၊ Ankaray နှင့် Metro အလုပ်လုပ်ပါသလား
သမ္မတကူပီလီ - တိုးတက်မှုကကောင်းတယ်၊
အာရုံစူးစိုက်မှု! Sivas Kayseri ဘူတာများအကြားတွင်ပက်ဖြန်းခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်
Steam Locomotive ဆိုတာဘာလဲ။
Weekend သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အဘယ်နည်း။ Metro, Metrobus နှင့် Steamboats အလုပ်လုပ်မလား။
ညမထွက်ရအမိန့်ကိုကျင့်သုံးမည့်မေလ ၃၀-၃၁ တွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၄၉၈ နှင့် ၂၂.၈၈၅ ကိုပင်စီစဉ်လိမ့်မည်။ မေလ ၃၀ နှင့် ၃၁ ရက်တို့တွင်တနင်္ဂနွေနေ့ညမထွက်ရအမိန့်များ [ပို ... ]
ဘတ်စ်ကားစျေးသို့ VIP လွှဲပြောင်းပါ
တူရကီသမ္မတကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္က္ဌ။ ဒေါက်တာ mailsmail DEMİRသည် SETA ဖောင်ဒေးရှင်းမှစီစဉ်သောအွန်လိုင်းဘုတ်အဖွဲ့တွင်ဝေဖန်ပြောကြားချက်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်အစီအစဉ်နှင့်တူရကီ [ပို ... ]
Eken သည် Bayraktar ကို National UAV Demirağ OIZ တွင်ထုတ်လုပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်
Covid-19 သည် SAHA Istanbul ကွန်ယက်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာသို့သယ်ဆောင်သည်
Ankara Sivas YHT စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံး - စုစုပေါင်းအရှည် ၃၉၃ ကီလိုမီတာရှိသော Ankara (Kayaş) Kırıkkale Yozgat Sivas အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
ကတ္တရာ၏တထောင်တန်ချိန် 142 မှ Golbasi
ကတ္တရာ၏ 55 တထောင်တန်ချိန် Lightning ယိုဖိတ်ခဲ့သည်
လူအားလုံးတို့သည် 203 တထောင်တန်ချိန်ဟော့ကတ္တရာသုံးAtıldıအဆိုပါ Sakarya
2 500 မှGüneşevlerကတ္တရာ၏တထောင်တန်ချိန်
သန်း 1 67 727 Kecioren မြူနီစီပယ်တစ်ထောင်ကတ္တရာသုံးသွန်းလောင်းခဲ့သည်တန်ချိန်
ကတ္တရာ၏3တထောင်တန်ချိန် TPAO တောင်းဆိုမှုကိုရှိ